Sawirka iyo sheekada maxbuus dayyac ugu dhintay Jeelka weyn ee Hargeysa
Saturday January 12, 2019 - 18:47:15 in Wararka by Super Admin
Waa gudaha qol ka mid ah xabsiga dhexe ee Hargeysa , ninka ka muuqada sawirka waxa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xirsi , daryeel la'aan caafimaad buu ugu geeriyooday gudaha Jeelka .Hadaba sidee bay wax u dheceen ? halkan hoose ka akhris
Waa gudaha qol ka mid ah xabsiga dhexe ee Hargeysa , ninka ka muuqada sawirka waxa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xirsi , daryeel la'aan caafimaad buu ugu geeriyooday gudaha Jeelka .Hadaba sidee bay wax u dheceen ? halkan hoose ka akhriso :
Waxa ku geeriyooday gudaha xabsiga dhexe ee Hargeysa 19/5/2017 Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xirsi oo da’diisu ahayd 73 jir , oo qabay xanuunada macaanka iyo dhiig-karka ,oo ka soo jeeday deegaanka Dila ee gobolka Awdal.
Bilihii uu ku jiray xaruunta baadhista dambiyada ehelkiisu waxa ay marar badan codsadeen in damaanad lagu sii daayo xaaladdiisa caafimaad awgeed oo uu yimaado xaruunta marka loo baahdo balse wuu ka diiday Daahir Muuse Abraar oo ah taliyaha xaruuntaas.
Waxa aan ku soo gabogabaynayaa oo isweydiin mudan : Yaa ka masuul ah sababta geerida Cabdiraxmaan ?